Ibhakede abembayo elisetshenziswa izimayini (amatshe, ubumba, njll) ukususa amatshe. Futhi asetshenziselwa ukuphrofayela emithambekeni wesitimela anemifantu neziteshi, kanye-sindisa materials okuxekethile imfucuza idwala. Le nqubo Ungasingatha nenhlabathi ukuze isigaba 4, okuyinto zingenalo amatshe amakhulu (inclusions). Excavator usebenza kahle, uma ububanzi we inclusions lingaphansi kuka okwesihlanu ububanzi ebhakedeni.
Kuyaphawuleka ukuthi ebusweni phansi ngokusebenzisa amasu esinjalo etholwe flat futhi ayidingi shanela mathupha. Kulesi sihloko sizofunda okwengeziwe yokuthi kuyini Excavator.
Ngokuvamile, multi-ebhakedeni abembayo asetshenziswa ezindaweni lapho kukhona yenqwaba uhlobo olufanayo lomsebenzi, ukugxila endaweni eyodwa. Isizathu sisobala - big Ubukhulu imishini. Iyiswa bengonozulane ngenxa imisebenzi ezincane kubize nesikhathi, futhi ngenxa yalokho, akulungile. Ukuze imisebenzi ezincane, okusho ukunyakaza njalo, kukhona model elincane imoto noma isondo womoya ukumbiwa.
Isisetshenziswa libhekwa ngezici ezifana:
Esikhathini yekuhambisa sandla ngesikhatsi kokuhlinzwa. Kungenzeka abembayo longitudinal, transverse noma rotary yokumba imodeli.
Ngu uhlobo (ukwakhiwa) imishini emsebenzini. Kukhona uchungechunge abembayo nesondo-ebhakedeni.
Ngokusho indlela lokuveza imishini ebusweni. rock ahlabayo kuyinto osabalalayo mpo, osabalalayo ovundlile noma zibhekisela mpo.
Ngokusekelwe kulezi zici, singaphetha ngokuthi kukhona izinhlobo eziningana ukumbiwa. Ake sicabangele ngayinye yalezi zinkulumo ngokwehlukile.
Lokhu uchungechunge Excavator ebhakedeni okungase zilandelwa noma wesitimela ithrekhi. Inikwe amandla yi-ukusikeka parallel noma osabalalayo. I chain kungenziwa iqondiswe (elisetshenziswa nenhlabathi eyohlobo ngoba isizinda amaminerali nobe sakhiwo iziteshi ezinkulu kanye anemifantu) noma hang alengayo (elisetshenziswa nenhlabathi nge inclusions). Kukhona futhi ukumbiwa, abakhasi ibanga okuyinto ingase yehluke kuye ngesistimu yokusebenza izimo. Zisetshenziswa for ukumba ukuhlanzwa we amanzi kanye neensetjenziswa iziteshi.
Technique yokumba longitudinal
Lokhu ebhakedeni emseleni Excavator. Ngokuvamile abakhasi, sondo abakhasi, motor womoya noma hambisa. Ngakwelinye ihlangothi, longitudinal imodeli yokwemba zihlukaniswe labo letisebenta nge chain annular nalabo umzimba ukusebenza okuyinto isondo ladle (Rotor). Eyokuqala esetshenziselwa ukumba imisele ububanzi esingeqile 1.1 m kanye 3.5 m Okwesibili Ukujula umbe emgodini ezijulile -. 1.6-1.8 m.
rotary esigcwele Ithuba
Njengomthetho, lolu hlobo abakhase. Kodwa ngezinye izikhathi zikhona wesitimela. Idivayisi ifakwe isondo ebhakedeni kanye motor kagesi. It kungenziwa usike idwala radially e izindiza evundla mpo. Isetshenziselwa isizinda namaminerali adingwa zenzeka ngesimo izingqimba. Kungenzeka ubumba refractory kanye nezinye izinto. Ibhakede Excavator (ibhakede) liyasetshenziswa ku imisebenzi ezinkulu zokwakha kanye overburden.
Naphezu kweqiniso lokuthi namahalavu sekusakazeke kakhulu, multi-ebhakedeni, babe eziningi eziwusizo elingenakuphikwa lokuthi bakwazi ukubamba isikhundla sabo emakethe. Ake sihlole lezi zici:
umsebenzi okuqhubekayo ku kumbiwa idwala. Phakathi naleso sikhathi, owodwa ebhakedeni kudivayisi ngesikhathi ngqo inhlabathi amasampuli kuyinto esiphezulu 30% wenani isikhathi sokusebenza.
Uma siqhathanisa ebhakedeni elilodwa kanye imodeli multi-ebhakedeni nokusebenza esifanayo, kuyabonakala ukuthi imoto eyodwa-ebhakedeni kusinda futhi nzima.
Excavator uchitha ikhefu 1 imitha cubic of rock amandla kakhulu esingaphansi idivayisi sinekhono okufanayo, kodwa kunezinto ibhakede elilodwa.
Ngisebenza umsebenzi wokwakha, idivayisi multi-ebhakedeni kwenza kuhlangana iyunifomu kokubili zinhlobo ekhiqizwa impahla kanye ekuhlungeni.
Ukuthuthukisa inhlabathi Excavator izibambo bevels. Ngenxa yalokho, ekhosombeni ithola cishe ephelele iphrofayela cross-Sectional. umshini One-ebhakedeni eba Amashalofu okubeka ikhefu futhi ngamunye kubo eshiya ligcwalise isikhala esasisele.
Nokho, kukhona imingcele okuyinto namafosholo ngokucacile onqobayo. Mhlawumbe kungenxa yokuthi kungase kube ngubani kubo namanje umholi emakethe. Excavator has ubuthakathaka ezilandelayo:
Lo mshini - a Foodie yangempela, elikwaziyo ukuthuthukisa inhlabathi kuphela eyohlobo hhayi ningi than 4 ekilasini noma nge inclusions elincane amakilasi angu-3. Lokwela akunankinga ukusebenza noma isiphi isigaba kanye nohlobo inhlabathi, kuhlanganise emadwaleni.
Umshini nge ibhakede akuyona ziyakukhetha kwisimo sezulu, engesiyo version Ibhakede.
Ngokucaca sihlaziye ambalwa Ngokwesibonelo Excavator.
Le yunithi yasekhaya, esakhiwa:
Ukuzulazula namandla imishini, kanye izindlela ukuthi ogibele uzimele-non-ligijima the ibhande, esiklanyelwe konakalisa ecaleni noma ngemuva ezokuthutha.
imishini Ukusebenza (chain nge amabhakede) ogibele luhlaka-boom.
Njengoba imishini navigation wenza multisupporting isibungu. Kuvele yangaphakathi omlilo injini ukushayela amagiya okuhambisa Ukujikeleza nge ukudluliswa chain. Track ozimele axhunyiwe nge semiaxes futhi idivayisi kulinganisa kanye Uhlaka main. It kuvela ukuthi uzimele main usemahlombe abakhasi at amaphuzu amathathu. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuze kuzuzwe okuhle cross-Excavator.
Lapho ladle uchungechunge Excavator ngokwayo ezihambayo, kwakheka emseleni mpo. Umhlabathi wabuyiselwa amabhakede, ngokusebenzisa hopper ifinyelela elihambayo isiyaphela. Yena, amcibe eceleni.
Multi-ebhakedeni, emseleni, imodeli uchungechunge EM-251 Ungashintsha isikhundla isihlobo boom ukuze uzimele. Yena ukudansela isiginci sakhe emuva umhlahlandlela elikuvumela ukuthi iguqule izinga yayo Ukungena, futhi kungakho we emseleni ukujula. Lapho ethutha iyunithi boom ke usesimweni phezulu. umshini ilawulwa isilawuli ekhethekile akude, okuyinto ibekwa cab ngakwesokudla we-opharetha, mayelana gearshift. Lokhu kuvumela uhlelo umshayeli ukuqapha kanyekanye ukuhamba umshini futhi umsebenzi ukumba izindlela.
Ake sicabangele isenzo esisodwa ngaphezulu Excavator ebhakedeni. Em-281 - njengoba ngezinye izikhathi ngephutha wabhekisela kulesi imodeli. Siqukethe:
Odnorebernymi ibhanoyi amasondo ahamba. It isethwe Uhlaka detachable usekela hopper turasny kushaft ipulazi counterweight, endlwaneni eyakhiwe, njengelive lelisemkhatsini Uhlaka ingxenye ladle, futhi-ke, injini nge ukudluliswa.
phansi Ngendebe ifreyimu esesikhundleni iyunithi ezimbili zokuhlela ethwele chain nge amabhakede.
Jib, okuyinto igcina uhlelo iziteshi futhi uvimbele ukumiswa.
imishini kagesi kanye namadivayisi ukukhanyisa.
i excavator ilawulwa esebenzisa iziyisikhombisa ezintathu, okuyinto zitholakala cab ka-opharetha. Umsuka unesibopho turning iketango ladle. Okwesibili - i-course ye-inqola. Awu kanti eyesithathu - I-ukukhulisa ukwehlisa we boom. Lesi sakamuva agcinwe kule sikhundla wayefisa ngu ukubopha, esemgwaqweni ku kushaft worm. I motor kagesi ezithwala ezinyakazayo ngokusebenzisa V-amabhande, amaphaphu awo, kanye umumo womsebenzi engela isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo eliqhutshwa yokuma tensioner. Umphini main idlulisela ukujikeleza nge chain drive turasnomu. Ibhakede inhlabathi cut is adluliselwe ku-hopper, bese yanikezwa inqola, ethutha ukuze indawo oya kuyo.
Ngenxa Excavator ephakamisa indophi, izithombe okuhlanganiswayo ngenhla ingasetshenziswa kokubili parallel yasenhla nemithombo yasenzansi for ukumba synchronously wazibuza yona futhi kwehlisa ngesikhathi lapho zombili imikhawulo ladle uzimele. Ngakho, ladle Uhlaka uhamba zifana kuya uqobo. Amabhakede lapho ungqimba isuswe kuyinto of ukushuba umfaniswano ngasiphi ekuhlatshweni ukuphakama. Ukuze afeze Fan ahlabayo, lokusho ukuhamba eyodwa kuphela ekupheleni Uhlaka, it is kwehlisa ngokufanele.
Namuhla sithole ukuthi ziyini multi-ebhakedeni abembayo futhi kungani abawona ejwayelekile njengesinkwa eyodwa ebhakedeni. Kuyaphawuleka ukuthi imingcele umthamo we izimoto ukusebenza eziphoqelelwe umbono zenhlabathi, kunalokho ezivamile futhi kuhluke yezinhlobo ezahlukene ukumbiwa. A eragela multi-imishini kanye nokwethulwa imiklamo emisha kusikisela ukuthi ngesikhathi esifushane wonke amaphutha kuyoqedwa
By the way, kuya Excavator evamile futhi zihlanganisa yokumba okuqhubekayo, naphezu kweqiniso lokuthi e kubo esikhundleni amabhakede umzimba zokusebenza Milling noma scrapers.
Ukufakwa iphayiphi: Izindlela kanye Technologies
Amathuluzi Ukulinganisa: Beka umkhawulo ubude izinyathelo indiza ayefana
MAP yokuhlola: kuyini futhi kungani sasidingeka?
Indlela hlola amathiphu eziqondisa ekhaya
Omzimba izicubu erythematosus: izimpawu, izimbangela kanye ukuxilongwa isifo